TestFlight: iOS Beta Testing na Live App Monitor | Martech Zone
Nnwale ngwa ngwa mkpanaka bụ ihe dị oke mkpa na ntinye ngwa ngwa ọ bụla. Ọ bụ ezie na ngwa mkpanaka na-aga nke ọma nwere njikọ aka dị egwu ma nyekwa ndị ahịa na ụlọ ọrụ nnukwu uru, ngwa ekwentị mkparịta ụka abụghị naanị ọdachi nke ị nwere ike idozi.
Mwepu nke ngwa mebiri emebi ma ọ bụ ngwa nwere obere njiri ike ga-akụda nnabata, nyocha ndị na-adịghị mma… na mgbe ị ga-edozi ngwa ahụ, ị ​​nọ n'azụ bọọlụ asatọ.
N'ime mpaghara Apple nke mmepe ngwa, gụnyere iPhone, iPad, iPod touch, Apple Watch, na Apple TV, azịza maka ule beta na ịdebe chinchi na ahụmịhe onye ọrụ bụ Ọnọdụ nnwale.
Testflight bụ ngwa ntinye ngwa beta ebe ị nwere ike ikpo ndị ọrụ iji nwalee ngwa gị. Nke a na-enyere ndị otu gị aka ịmata chinchi na ịnakọta nzaghachi bara uru tupu ịtọhapụ ngwa gị na Storelọ Ahịa Ngwa. Iji Testflight, ị nwere ike ịkpọbata ndị nnwale 10,000 na-eji naanị adreesị email ha ma ọ bụ site na ịkekọrịta njikọ ọha.
Ndepụta maka Nnwale Ngwa Ngwa
Enwere ọtụtụ okwu enwere ike ịmata yana ule Ngwa Ngwa ị kwesịrị ịtụle:
ndakọrịta - Mkpebi ihuenyo, ngosipụta nsogbu na mpaghara na eserese eserese, sistemụ sistemụ arụmọrụ nwere ike ịmetụta otu esi arụ ọrụ ngwa gị.
ikikere - have nwere ikikere nke etinyere ma hazie iji nweta atụmatụ ekwentị (faịlụ, igwefoto, accelerometer, wireless, wifi, Bluetooth, wdg)
bandwit - Imirikiti ngwa ejiri jikọtara ya na igwe ojii, yabụ ị chọrọ ịchọpụta obere bandwidth anaghị emetụta arụmọrụ ngwa ahụ ma ọ bụ opekata mpe ka onye ọrụ mara na enwere ike ịrụ ọrụ arụ. Nwere ike ịchọ ndị ọrụ nwere naanị njikọ 2G ruo 5G.
Ọhụụ - Ọtụtụ ndị na ngwa igba egbe ma na-akpali mmasị ahịa mkpọsa gburugburu ya maka nkenye ọnọdụ. Onye ọ bụla na-edebanye aha ya ma ngwa ahụ daa ka ndị ọrụ sava gị enweghị ike ịnagide nrụgide ahụ. Nnwale ule na ike ị nwere iji bulie ma dozie nsogbu nrụgide dị oke mkpa.
usability - Dee akụkọ ndị ọrụ banyere otu ị kwenyere na ndị ọrụ kwesịrị isi jiri ngwa gị na-emekọrịta ihe ma hụ otu ha si emekọrịta n'ezie. Ihuenyo ndekọ bụ ụzọ dị mma iji chọpụta ebe ọgba aghara nwere ike ịbụ na otu ị nwere ike isi gbanwee ihe iji hụ na iji ya eme ihe.
Analytics - I jikọtara ya kpam kpam na SDK nyocha iji nyochaa njikọ gị na ngwa gị site n'otu njedebe ruo na nke ọzọ? Chọrọ nke ahụ - ọ bụghị naanị maka ojiji, kamakwa iji tinye usoro nlekota ndị ahịa na usoro ntụgharị.
orunótu - Kedu ka ngwa gị si arụ ọrụ na mpaghara ala dị iche iche yana asụsụ dị iche iche edobere na ngwaọrụ ahụ?
Ịma Ọkwa - you nwalela na ngwa ngwà iji hụ na ha na-arụ ọrụ, enwere ike ịhazi ya nke ọma, enwere ike ịdebe ya?
mgbake - Ọ bụrụ (na mgbe) ngwa gị dara ma ọ bụ mebie, ị na-ejide data ahụ? Nwere ike onye ọrụ naputa site okuku na-enweghị mbipụta? Hà nwere ike ịkọ akụkọ?
nnabata - Ngwa ekwentị mkpanaaka gị ọ dị nchebe, njedebe ya niile echedoro, ma na-agbaso usoro iwu niile chọrọ tupu ị dị ndụ? Mgbe ị na-anwale ya, ịchọrọ ijide n'aka.
Etinyekwu oge n’ule ga-ahụ na ịmalite ngwa ngwa na-aga nke ọma. Testflight bụ ngwa dị mkpa na Apple gburugburu iji hụ na ngwa gị na-arụ ọrụ nke ọma, ndị a tụkwasịrị obi n'ụzọ ziri ezi, yana ngwa gị ga-enwetakwa nnabata ngwa ngwa na ojiji zuru oke nke ndị na-ege gị ntị.
Apple Onye Mmepụta Ule
Tags: nchịkọta ngwabandwidth ngwandakọrịta ngwannabata ngwaakụkụ asụsụmgbake ngwangwa scalabilityngwa ojijiiOS uleiphone nkesa na ngwaiphone ngwa uleiphone beta ulemobile ngwauletestflight ndụ